ဘဝကို ရင်းပြီး ပေးဆပ် စွန့်လွတ် ထားတဲ့ တချို့တွေကိုအရမ်း အားနာမိတယ်လို့ ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် – Shwe Likes
G Shwe | June 16, 2021 | Celebrity | No Comments
နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် နဲ့ ကိုဘင်း တို့ လင်မယားကတော့ အနုပညာ ဇာတ်လမ်းတိုင်း လိုလိုမှာ ဇာတ်ပို့အနေနဲ့ ကျရာနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်နိုင် တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု ကို ခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အပြောအဆိုတွေ သွက်လွန်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကတော့ အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းပေးနေတဲ့ အလုပ်တွေကြောင့်လည်း အရင်ကထက် အားပေးသူများလာရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝကို ရင်းပြီး ပေးဆပ် စွန့်လွတ်ထားတာ အရမ်းအားနာမိတယ်လို့ ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
ခုလိုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေ ကြားထဲမှာလည်း ပြည်သူလူထု နဲ့အတူ ရင်ဘတ်ချင်း ထပ်တူကျခဲ့ကြသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခင် မီနစ်ပိုင်းလေးမှာတော့ နှိုင်းယှဉ်က နေသာသလို မနေခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ အတွက် စိတ်ထဲမှာလည်း အားနာရင်း လိပ်ပြာမလုံတဲ့အကြောင်းကို သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာမှာ “နေလို့ရတာပေါ့ … ကလပ်သွား ဘားသွားပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး TGIF ပြီးစား လို့ရတာပေါ့… Novotel တက်ပြီး ဘူဖေး နေ့တိုင်းစားမလား? Lotte မှာ စားမလား? ဈေးမကြည့်ပဲနဲ့ကို စားနိုင်တယ်ဇိမ်ခံလို့ ရတာပေါ့…
ကမ်းခြေသွားပြီး sea view နဲ့ သာသာယာယာနေလိုက်, ရေငုတ်လိုက်..လှေစီးလိုက်နဲ့ လည်လို့ ရတာပေါ့… ဘန်ကောက်ကို ဆေး ဗီဇာ လျောက်, ဟိုမှာ Shopping လေးလုပ်, ဖူးခက်မှာ တပတ်လောက်နား ပြီးရင် ဘာလီ ဆက်သွား…( Covid ငြိမ်းရင် Bucket list ထဲမှာကျန်တဲ့ Europe က နိုင်ငံလေးတွေပါ ဆက်သွားလိုက်ဦး….🙃)သွားလို့ရတာပေါ့… ကိုယ်ပိုင် ကားလေးနဲ့ အပျင်းပြေ. ပုဂံ ညောင်ဦး ပုပ္ပါးဘက်ပြီးရင် အားတိုင်းသွားနေကျ ချောင်းသာ ငွေဆောင်…..ကျွန်မသိထားတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေ သူဌေးတွေ အများစု အေးဆေး အဲလို နေနေလို့ ရနေပြီ
ဥပမာ ကိုလူမင်း ကိုပဲ ကြည့်သာသာယာယာ ဘေးထွက်ထိုင်နေလို့ရတယ် ဒါပေမယ့် မှန်တဲ့ဘက် ပဲသူ ရပ်တည်သွားတယ်ကျွန်မ အပါအဝင် တော်တော်များများက ကျွန်မတို့ ရည်မှန်း အိမ်မက်ထားတဲ့ ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကိုနေထိုင်နေကြပြီဗျ…..ဘာမှ သိပ်မလိုတော့ဘူးဒါပေမယ့် မနေဘူး၊ မလည်ဘူး၊ မသွားဘူး၊ မစားဘူး၊ဇိမမြခံဘူး၊ အမှန်ဆို ငွေရှိတယ် အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်ပဲကို….သိပ်နေလို့ရတာပေါ့
ပြီးတော့ ရိုးရိုးသားသား သမ္မာအာဇီဝ နဲ့ ရှာတဲ့ငွေ‌ပေါ်တင်သုံးလို့ရတယ်….ခိုးထားတဲ့လူတွေလို မဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့် ကျွန်မ တို့မလုပ်ဘူး ….ကိုယ့်ထက် အောင်မြင်တဲ့လူတွေ ထောင်ထဲမှာ..ကိုယ့်ထက် ပညာတတ်တဲ့လူတွေ ထောင်ထဲမှာ..ကိုယ့်ထက် ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းတဲ့လူတွေထောင်ထဲမှာ..ကိုယ့်ထက် အနာဂတ်လှတဲ့သူတွေ တောထဲမှာ.. ကိုယ့်ထက်သတ္တိရှိတဲ့သူတွေ တောထဲမှာ…သူတို့ တွေကို ကျွန်မ အရမ်းအားနာလို့ကို အဲ့လိုမလုပ်ရက်ဘူးအရှုံးလည်း မပေးရက်ဘူး 😢The choice is yours 😊 ” ဆိုပြီး ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
မှန်တဲ့ဘက်ကပဲ ရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအတွက် စိတ်ဓါတ်ခွန်အားဖြစ်အောင် အားပေးစကားလေး ပြောပေးသွားကြပါအုံးနော်…
အဖိုးဖြစ်သူ ပြန်လွတ်လာပြီဆိုတဲ့ သတင်းအမှားတွေကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့မြေးမလေး လေပြေသွေး ..
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ရုပ်ကလာပ်ဘေးမှာ တရားနာ ရေစက်ချရင်း ဝမ်းနည်းကြေကွဲစွာ ရှုံးပွဲချ ငိုကြွေးနေတဲ့ နဝရတ်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ဒူဘိုင်း က သဲကန္တာရကြီး အလည်မှာ ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတု ကို အံတုနေတဲ့ နန်းမွေစံ
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ အလွန်အကျွံသောက်မိလို့ ဆေးရုံတက်လိုက်ရတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်